मन्दिरमा जुत्ता चप्पल हरायो ??? मानिन्छ शुभ संकेत!!! – News Nepali Dainik
मन्दिरमा जुत्ता चप्पल हरायो ??? मानिन्छ शुभ संकेत!!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०२, २०७७ समय: १३:२२:३६
तपाईंलाई जुत्ताचप्पलको सम्बन्ध ग्रह दोषसँग पनि हुन्छ भन्ने थाहा छ ? ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिको सम्बन्ध खुट्टासँग हुने भएकाले ग्रह दोषमा जुत्ताचप्पलको सम्बन्ध रहने गर्दछ।
यतिमात्र होइन, खुट्टामा लगाइएको जुत्ताचप्पल मार्फत राहु र केतुसँग जोडिएका दोष घरमा भित्रिने समेत गर्दछ । यस प्रकारको दोष निवारणकालागी निम्न उपया गर्न सकिन्छ।
*) कुण्डलीमा शनिको कुनै दोष वा अढैय्या अथवा साढेसाती चलिरहेको छ भने शनिवारका दिन कसैलाई जानकारी नदिई कालो रंगको छालाको जुत्ता वा चप्पल शनि मन्दिरको प्रवेश द्वारमा खोलेर फर्कनु पर्दछ। तर स्मरण रहोस् छाडेर आएको जुत्ताचप्पललाई फर्केर नहेरी घर फर्कनु पर्दछ । यसले जीवनमा सकारात्मक बदलाव ल्याउने मान्यता रहेको छ ।
**) यदि मन्दिरमा जुत्ता वा चप्पल चोरी भयो भने यसमा कुनै दुखः मनाउ नगर्नुहोला । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मन्दिरबाट जुत्ताचप्पल हराउनु जीवनमा शुभ संकेतको प्रतिक हो । अझ शनिवारका दिन चोरी भएमा यो झनै शुभ फलदायी हुने शनि दोषबाट राहत पाउने मान्यता छ ।
***) कुनै पनि महत्वपुर्ण काम, परीक्षा, जागिरको अर्न्तवार्ता, छोराछोरीको विवाहको प्रस्ताव लिएर जाँदा वा लामो यात्रामा जाँदा भुलेर पनि फाटेको जुत्ता चप्पल नलगाउनु होला । महत्वपुर्ण काममा यस्ता जुत्ताचप्पल लगाएर जादाँ कार्यमा बाधा आउने मान्यता छ ।
Last Updated on: January 15th, 2021 at 1:22 pm